Zvikonzero zvekuisa hurungudo pamafuta-akanyudzwa matransformer
na admin pa 21-11-15
Oiri-akanyudzwa magetsi emagetsi ari kushanda nekudonha kweoiri kwakakomba kana kuenderera kuyerera kubva panzvimbo yakakuvadzwa kuitira kuti geji yemafuta isakwanise kuona huwandu hweoiri. Panguva ino, transformer inofanira kumiswa pakarepo kugadzirisa kuvuza uye refuel. Chikonzero chekuchinja ...
Kusarudzwa kwemafuta-akanyudzwa transformer inotungamira
na admin pa 21-11-09
Oiri-yakanyudzwa transformer lead classification uye zvinodiwa, simba mafuta-akanyudzwa transformer lead ine yakatenderera copper waya, copper bar uye yakapfava mhangura waya, mutobvu dhayamita iri pazasi 12mm netambo yemhangura yakatenderera. Iyo yemuchinjikwa chikamu chekutungamira ndeye 80 ~ 100㎜? Paunenge uchishandisa copper bar. Waya yemhangura yakapfava ndeye...
Kubatanidza maitiro emafuta-akanyudzwa transformer
Oiri-immersed transformer chinhu chakakosha chemagetsi chinoshanda nemafuta etransformer. Iyo yakajairika kushandiswa kwemafuta-akanyudzwa transformer zvakare yakawanda. Mutsara wemafuta-akanyudzwa transformer yakawanda, uye inogona kukuvadzwa. Ndedzipi nzira dzekubatanidza uye mhepo dzakanyudzwa mafuta-akanyudzwa matransformer? Kana kuti...
Kuongorora ruzivo rwemafuta-akanyudzwa transformer vanogadzira 1, mutoro wezvino hausi mukati mehuwandu hwehuwandu hwehuwandu, hapana kuchinja kwakasimba, magetsi ekushanda haasi akajairika. 2, chiyero chemafuta, ruvara rweoiri, tembiricha haisi kupfuura kukosha kwakatarwa, hapana kudonha kwemafuta ...
Kusimudza musimboti wemafuta-akanyudzwa transformer
Oiri-yakanyudzwa transformer musimboti yakakosha chimiro uye mhando yeoiri-yakanyudzwa transformer, mafuta-akanyudzwa transformer musimboti ibasa rakakosha, mafuta-akanyudzwa transformer musimboti ane akatevedzana maoperation, kuitira basa guru remafuta-akanyudzwa transformer core uye matanho makuru ndeapi? Isu...
Kuremerwa kwemafuta-akanyudzwa transformer
Paunenge uchiisa anopfuura maviri makuru ekushandura, sarudza yega yega chiyero maererano nekutadza kwesimba kweimwe main transformer. Kusara kwesimba kunogona kuvimbisa angangoita 60-75% yemutoro wekutanga kana huwandu hwese hwechiteshi. Kazhinji 75% yekutanga substation uye 60% yechipiri substation inoshandiswa....
Mutual inductance voltage yemafuta-akanyudzwa transformer
Iyo terminal yeoiri-yakanyudzwa transformer ine zita rimwe chetero inotsanangura kuti terminal yeinductor ikozvino inoyerera ichipinda mucoil uye iyo yakanaka polarity terminal yemutual inductance voltage mune imwe coil inodaidzwa kuti terminal yezita rimwe chete remabatanidzwa maviri. makoiri, uye...
2500KVA oiri yakanyudzwa transformer
Yechigadzirwa Sumo: Ichi chigadzirwa chine kuita kwepasi-pasi-kuremerwa kurasikirwa, yakaderera isina-mutoro ikozvino, yakaderera ruzha, simba rekuchengetedza simba rinoshamisa. Kuvandudza mhando yevoltage uye kuvimbika kwekupa magetsi, inoenderana nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kweyakasvibira magetsi ekuchengetedza michina, yemadhorobha uye ru...
S11-M-250/10 mafuta-akanyudzwa transformer
Kuita maitiro emafuta-akanyudzwa akanyatsovharwa kugovera transformer Kana ichienzaniswa neS9 transformer, iyo isina-mutoro kurasikirwa kweS11 transformer inoderedzwa neanenge 30% paavhareji. Kugona kwe630 ~ 2500kVA yakaderera-voltage mhepo mukati meiyo cylindrical kana spiral chimiro, yakakwira mechanic ...
Three phase oiri yakanyudzwa kugovera transformer
I. Zvigadzirwa zvechigadzirwa Iyo mitatu-chikamu mafuta-akanyudzwa kugovera transformer inogadzirwa nekambani yedu inotora nyowani yekumisa chimiro kuti ivandudze kugona kwepfupi wedunhu kuramba. Iyo musimboti wesimbi inogadzirwa neyemhando yepamusoro inotonhora yakakungurutswa silicon simbi sheet. High voltage windings yakagadzirwa nepamusoro-soro ...
1000KVA yakaoma -mhando transformer
Zvimiro zve1000KVA yakaoma type transformer 1. Kurasikirwa kwakaderera, simba rakanaka rekuchengetedza simba, kuunza zvikomborero zvehupfumi mukushanda.2. Flame retardant, kuputika-chiratidzo, kusvibiswa-isina, kugadzirisa-isina, kunogona kuparadzirwa munzvimbo yekutakura, kuderedza mari yekudyara, kuchengetedza mari. 3. Local discharge simba shoma t...